jumladaCOVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Kit Kit Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiye | Immuno
Loo Adeegsaday Ogaanshaha COVID 19 Antigen
Imtixaanka 'IMMUNUBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test' waxaa loogu talagalay ogaanshaha antigens-ka SARS-CoV-2. Anti-SARS-CoV-2 unugyada unugyada monoclonal waxay ku dahaadhan yihiin qadka tijaabada waxayna kuxiran yihiin dahabka kolloidhka ah. Inta lagu jiro baaritaanka, muunadku wuxuu la falgala anti-SARS-CoV-2 antibodies conjugate in the strip test. Isku darka ayaa markaa kor ugu socdaalaya xuubka chromatographically ficil ficil leh wuxuuna la falgalayaa antibodies kale oo anti-SARS-CoV-2 ah oo ku yaal gobolka imtixaanka. Dhismaha ayaa la qabtay oo laga sameeyay khad midab leh oo ku yaal gobolka xariiqda Tijaabada. Tijaabada 'SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test' waxaa ku jira anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies walxaha isku dhafan iyo unugyada anti-SARS-CoV-2 monoclonal monoclonal kale ayaa lagu dahaadhay gobolada safka tijaabada.
A. Imtixaan dhakhso ah, ku hel natiijada 10-15 daqiiqo gudahood.
B. Dareenka weyn iyo gaar ahaanta
C. Easy si ay u shaqeeyaan, uma baahna qalab, haboon oo dhakhso leh
D. Dhareerka iyo Suufka sanka labadaba waa lagu dabaqi karaa
3. Liiska cad ee Shiinaha ayaa ansixiyay soo saaraha xirmooyinka tijaabada ee COV 19
Tijaabi Producer Dharka candhuufta
2. Qalabka tijaabada dhig dusha nadiif ah oo jiif ah. Ka noqo tuubada aruurinta muunada, ka sii bixi 3 dhibcood oo ah tijaabada la diyaariyey tijaabada si fiican (S) ee cajalada tijaabada oo bilow saacada. Hoos ka eeg sawirka:
3. Sug inta xarriiqda midabku soo muuqanayaan. Ku aqri natiijooyinka 10 daqiiqo. Ha turjunin natiijada 15 daqiiqo kadib
Amarada oo dhan waxaa lagu keenayaa 1 usbuuc gudahood ka dib bixinta lacagta. Iyada oo wadashaqeyn waqti dheer la leh airexpress iyo soo gudbiye badan, qiimaha adeeggu wuu ka fiican yahay.
1. Qiimaha Warshada, macquul ah oo tartan leh
2. adeegga OEM / ODM, Ma aha oo kaliya baakadaha iyo u qaabeynta brand, waxaan leenahay shaybaar u gaar ah iyo kooxda R&D, kaas oo horumarin kara oo u habeyn kara alaabada macaamiisha leh
3. Ku soo dhawow wakhti iyo si dhakhso leh, wakhti kasta iyo goob kasta oo loogu talagalay adeegga macaamiisha.
4. Soo bandhig tababar xirfadeed iyo shaybaaryo tayo leh si ay macaamiisha uga caawiyaan horumarinta suuqa
5. Hababka ganacsi ee rogrogmi kara si loo daboolo baahida macaamiisha iyo ganacsiga
Su'aasha 1aad: Miyaan heli karaa shay-baarka ka hor inta aan la ciyaarin amarka dufcadda?
A: Muunad Qulaified ah ayaa la heli karaa, faahfaahinta fadlan la xiriir iibkeena.
J: MOQ way ka badan tahay “0 ″, laakiin kooxdayada iibka ayaa kaala talin doonta inta ay dalbanayso iyada oo ku saleysan alaabada aad u baahan tahay, xaaladaha suuqa qaranka, kharashka saadka caalamiga ah iyo arrimo kale
Su'aasha 3aad: Ka waran tayada?
J: Waxaan horeyba u helnay CE, iyo sidoo kale liiska caddaanka ah ee dowladda Shiinaha, sidoo kale, waxaad ka heli kartaa natiijada baaritaankayaga musiibada Wasaaradda Caafimaadka Jarmalka
Su'aasha 4aad: Meeday warshaddiinii? Ma booqan karaa warshaddaada?
J: Waxaan joognaa Hangzhou, Alibaba sidoo kale halkan ayaan ku yaalay, nus-saac waxaan uga jirnaa Shanghai tareen xawaare sare ku socda. Waa lagugu soo dhaweynayaa waqti kasta oo aad na soo booqato.
Su’aasha 5aad Ma waxaad warshad ama shirkad ganacsi
J: Annagu waxaan nahay warshad, wax soo saarka aan soo bandhigno oo dhan waa R&D oo wax soo saar annaga ayaa iska leh
Su’aasha 6aad: Sideen u bixin karaa?
J: Waxaad ku bixin kartaa USD, EURO & RMB adoo adeegsanaya T / T, PayPal ama Western Union.
Su’aasha 7aad Shahaadadee ayaad haysataa:
Hore: 2019-ncov xarigga tijaabada antigen degdega ah
Xiga: COVID-19 Qalabka tijaabada Antigen
Qalabka COVID-19 Antigen Degdegga ah
SARS-CoV-2 Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee Antigen